Browsing Burmese translation : Burmese (my) : Template “debian-installer” : Zesty (17.04) : Translations : debian-installer package : Ubuntu
744 of 1729 results First • Previous • Next • Last
Since you are formatting this partition, you should correct this problem now by realigning the partition, as it will be difficult to change later. To do this, go back to the main partitioning menu, delete the partition, and recreate it in the same position with the same settings. This will cause the partition to start atapoint best suited for this disk.
သင်​သည်​ကန့်သတ်​ထား​သော​အစိတ်​အပိုင်း​အရာ​အားလုံး​ကို​ဖျက်​ပြီး​ခဲ့​လျှင် အစိတ်​အပိုင်း​ကို ပြန်လည်​ချိန်​ညှိ​ခြင်း​ဖြင့် ဤ​အမှား​ကို​သင်​ပြင်ဆင်​နိုင်​သည်။ နောက်မှ​ပြင်ဆင်​ရန်​ခက်ခဲ​လိမ့်​မည်။ ဤသို့ ပြုလုပ်​မည်​ဆို​လျှင် ကန့်သတ်​စိတ်​ပိုင်း​ပေး​သော​အချက်အလက်​သို့ နောက်ပြန်​သွား​ရောက်​၍ ကန့်သတ်​ထား သော​အစိတ်​အပိုင်း​ကို ဖျက်​ပစ်​ပြီး တူညီ​သော​အနေအထား​နှင့် အချက်အလက်​များ​ကို အသစ်​ပြန်လည် ပြုပြင်​ခြင်း​ဖြင့် Disk ၏ အကောင်း​ဆုံး​ကန့်သတ်​ထား​သော အစိတ်​အပိုင်း​မှ​စတင်​နိုင်​သည်။
Translated and reviewed by Nyi Nyi Htwe on 2013-03-04
Located in ../partman-ext3.templates:10001